Norarana nandritra ny 30 taona, hita amin’ny YouTube ankehitriny ny filma haiady tokana an’i Singapaoro · Global Voices teny Malagasy
Ilay filma no kapisilin'ny fotoana nanokatra ny lasan'i Singapaoro
Voadika ny 21 Mey 2020 5:06 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, नेपाली, Français, Español, English
Iray amin'ny sehatry ny sarimihetsika Ring of Fury. Pikantsary avy ao amin'ny YouTube.
Azo jerena ao amin'ny YouTube ankehitriny ny filma haiady voalohany sady tokana ao Singapaoro.
Natao tamin'ny taona 1973 ny filma saingy tsy nankatoavina hojerem-bahoaka noho izy “manoritsoritra ny fanjakazakan-jiolahy sy ny fitsaram-bahoaka tamin'ny fotoana henjana dia henjana ny ‘fanadiovany’ ny endriny eo amin'ny sehatra nasionaly,” araka ny filazan'ny Asian Film Archive (AFA na Arisivan'ny Filma Aziatika).
Fa naseho ihany izany nandritra ny fetiben'ny filma iray tao an-toerana tamin'ny taona 2005 ary nomen'ny AFA ny hasiny indray tamin'ny taona 2017.
Na dia voafetra ihany aza ny fampielezana azy, dia ankatoavina ho “vatosoan'ny karazana sinema Singapaoreana” izy io.
Nakana aingam-panahy avy amin'ny filman'i Bruce Lee mitondra ny lohateny hoe “Fist of Fury” [Totohondrim-pahavinirana] izay nivoaka tamin'ny taona 1972 io filma io. Tantaraina ao ilay mpivaro-panjaitra nianatra kung fu hamaly faty ny fianakaviany sy hiady amin'ny andian-jiolahimboto.
Manana ny lanjany ara-tantara izy io eo amin'ny tantaran'ny filman'i Singapaoro *sy* ala-hamohamo an-taonina. Ady manapatapa-taolana, sarontava ambany sarontava, alika mijery fakantsary, Satay Club miloko, Valam-Borona Jurong, fetin-jiolahy bemanadala – ao daholo izany! Ankasitrahana @AFA_archive !!! https://t.co/1EBOZLTB9t
Peter Chong no mpiantsehatra voalohany, tena mpifehy karate izay nitazona ny kopia tokan'ny filma tao anaty vata fampangatsiahana nialoha ny namerenana azy amin'ny laoniny.
Nantsafain'ny arsivistan'ny Arisivan'ny Filma Aziatika, Chew Tee Pao, ny tale mpiara-manatanteraka ilay sarimihetsika, James Sebastian, tamin'ny taona 2019 momba ireo fanamby nandritra ny famokarana ny “Ring of Fury” na Peratry ny Fahavinirana
Nanoratra ilay arsivista :
Tamin'ny maha-filma manoritsoritra ny fanjakazakan'andian-jiolahy tao Singapaoro tamin'ny taompolo 1970 azy, dia nifanehatra tamin'ireo andian-jiolahy tena izy ny mpanatontosa ny filma tahaka ireo izay nampatahotra ny mpivaro-mandeha tao an-toerana hany ka tsy maintsy nitandrim-pandeha mba tsy hihoatra ireo fefy sasantsasany. Nalaina filma amin'ny fomban'ny mpiady anaty akata, tsy nahazo alalana haka sary famin'ny fomba ofisialy tany amin'ny toerana rehetra ny mpanatontosa filma
Nohazavain’ny mpiantsehatra Peter Chong nandritra ny antsafa tamin'ny fampitam-baovao tamin'ny taona 2017 ny antony nitsipahan'ny mpanao sivana ny filma tamin'ny taona 1973:
Tantara tena nisy tao Singapaoro nandritra ny faramparan'ny taompolo 1960 io raha mbola betsaka ireo andian-jiolahy manangom-bola solon'ny fiarovana. (Saingy ny mpanao sivana) no niteny fa tsy afa-mandray ho eo ampelatananao ny lalàna ianao. (tsy ianao no hanao kilalao ny lalàna?)
Nahaleotena avy amin'i Malayzia i Singapaoro tamin'ny taona 1965. Teo amin'ny fahefana hatramin'ny nananganana ny fanjakana mandraka ity androany ny antoko mitondra ao amin'ny People's Action Party (PAP na Antokon'ny Katro-Bahoaka). Ny PAP no ekena ho nitondra an'i Singapaoro hankany amin'ny firenena anisan'ny manankarena indrindra eto ambonin'ny tany, na dia voampanga ihany koa ho manao fanarahamaso ara-tsosialy henjana aza izay manitsakitsaka ny fahalalaham-pitenenana sy ny demaokrasia.
Mahafantatra avy hatrany ny dikany goavana ara-kolontsaina entin'ny “Ring of Fury” izay nijery ny filma izany naverina tamin'ny laoniny indray tamin'ny taona 2017.
Raha naneho hevitra tao amin'ny Letterboxd, tambajotra sosialy manerantany hiresahana sy hahitana ireo filma avy eny amin'ny fotony, mpisera iray antsoina hoe celeste no nanamarika fa asehon'ny filma ny endrika tsy mampino an'i Singapaoro, tena lavitra dia lavitra amin'ny misy azy amin'izao fotoana.
Misy sarimihetsika tsy mampino mihitsy ary mihoatra noho ny zavamisin'i Singapaoro tamin'ny taona 60s/70s, toerana iray izay toy ny firenen-kafa mihitsy ho ahy.
Izany no miteraka ny klasika… piesy goavana tokoa amin'ny tantaran'ny sinema shinoa sg
Ny tena voina dia ny nandrarana azy mandra-pahatonga ny taona 2005, azonao eritreretina ve ny satan'olomanga tokony ho nananan'ity filma ity amin'izao fotoana.
Ny mpanoratra Ben Slater nanazava ny mety ho fiantraikan'ny sehatrasan'ny sarimihetsika tao Singapaoro raha tsy voasivana izy io:
Ezaka tamin'ny fiandohan'ny taompolo fitopolo ny hanao filma fitadiavam-bola. Noheverina ho karazan-javatra nitranga tany Hong Kong iny. Fa tsy nahomby satria voarara, miharihary fa tsy hanam-bintana tao Singapaoro. Ary heveriko, raha any amin'ny tontolo hafa mirazotra any, nivoaka ny filma ary tena nahazoam-bola aoka izany, dia mety ho nisy filma haiady 20 na 30 nivoaka an'i Singapaoro. Mety hoe nampiainga ny fananganana studio vaovao na firoboroboan'ny fanaovana filma izay mety ho nitranga tamin'izany fotoana, iza moa no mahalala. Tena mampalahelo moa fa tsy nitranga ny fiovan-javatra goavana.
Mpanao tamberina manoratra ho an'i The Last Word namariparitra ny filma ho manala voly ao anatin'ny zava-tsi-misy-dikany ao aminy:
Tahaka ny mahavalalanina ny “Ring Of Fury” saingy toy ny misy zavatra azonao ipetrahana tsara sy ihomehezana ao anatin'ny zava-tsi-misy dikany asehon'ny efijery, tsara ilay filma. Lany andro avokoa ny zava-drehetra momba ilay filma ary tafahoatra, hatrany amin'ny fanamboarana ny fanazarantena ka hatrany amin'ny olo-masiaka, saingy tsorina fa tena afak'andro aho nijery azy.
Ary nifarana tamin'ny fanontaniana lehibe ny tamberina:
… lafiny hafa tanteraka amin'i Singapaoro no nasehon'ny filma. Tahaka ny hoe ilay filma no kapisilin'ny fotoana (mitondra) mankany amin'ny lasan'i Singapaoro. Mbola mitoetra hatrany ny fanontaniana iray taorian'ny nijerena ilay filma. Nahoana no amin'izao fotoana izao vao naseho antsika ny filma?